Isizathu Sokuba Umfundisi Ashiye Icawa Yakhe | Udliwano-ndlebe
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiCibemba IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMaltese IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiOromo IsiPangasina IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTok Pisin IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUrdu IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiXhosa IsiZulu
UDLIWANO-NDLEBE | UANTONIO DELLA GATTA
EMVA kokufunda iminyaka eyi-9 eRoma, uAntonio Della Gatta waba ngumfundisi ngo-1969. Kamva waba yintloko kwisikolo sabefundisi kufutshane naseNaples, eItaly. Ngoxa wayelapho, waphanda waza wacingisisa ngenkolo yobuKatolika waza wafumanisa ukuba ayihambisani neBhayibhile. Uye wabalisela uVukani! ngeenzame zakhe zokufumana uThixo.
Sicela usibalisele, ukhule njani?
Ndazalelwa eItaly ngo-1943. Ndikhule kunye nabantakwethu noodade wethu kwilali encinane apho utata wayengumlimi ekwanguye nomchweli. Abazali bethu basiqeqeshela ukuba sizilandele kakuhle iimfundiso zamaKatolika.
Kwakutheni ukuze ufune ukuba ngumfundisi?
Xa ndandiseyinkwenkwana, ndandikuthanda ukumamela abefundisi ecaweni. Ndandichukunyiswa ngamazwi abo, nezinto ababezenza xa benqula. Loo nto yandenza ndakufuna nyhani ukuba ngumfundisi. Xa ndineminyaka eyi-13, umama wandithumela kwisikolo esifundisa amakhwenkwe izifundo ezihambele phambili zobufundisi.
Ngaba naniyifundiswa iBhayibhile kuqeqesho lwenu?
Hayi ncam. Xa ndandineminyaka eyi-15, omnye wootitshala bam wandinika incwadi eneencwadi zeVangeli—imbali yobomi nokushumayela kukaYesu ngoxa wayesemhlabeni—yaye ndayifunda izihlandlo eziliqela. Ndisakuba neminyaka eyi-18, ndaya eRoma ndisiya kufunda kwiiyunivesithi zecawa yamaKatolika, ezaziphantsi kukapopu ubuqu. Ndafunda isiLatin, isiGike, imbali, ifilosofi, ezengqondo nezonqulo. Nangona sasifunda iivesi zeBhayibhile yaye siphulaphula naxa kushunyayelwa, sasingayifundi yonke iBhayibhile.
Waba ngumphathi. Ngaba wawufundisa nokufundisa?
Umsebenzi wam osisigxina yayikukukhokela. Kodwa ndandikwafundisa nemithetho yeBhunga Lesibini laseVatican.
Kwakutheni uze uqalise ukungayithembi icawa?
Ndandikhathazwa zizinto ezintathu. Le cawa yayizibandakanya kwezopolitiko. Yayinyamezela ukunganyaniseki phakathi kwabefundisi namarhamente. Ibe ke ezinye zeemfundiso zamaKatolika zazivakala zingachananga. Ngokomzekelo, kwenzeka njani ukuba uThixo oluthando ohlwaye abantu ngonaphakade emva kokuba befile? Kwakhona, ngaba uThixo ufuna abantu baphindaphinde imithandazo kaninzininzi ngerozari? *
Wenza ntoni ngaloo nto?
Kusehla iinyembezi emehlweni am, ndathandaza ndicela uThixo andibonise indlela. Ndathenga iBhayibhile yamaKatolika eyayisandul’ ukuguqulelwa ngesiTaliyane ndaza ndaqalisa ukuyifunda. Kwathi ngenye intsasa ndibuya ecaweni, ndisaxhoma isinxibo sam, kwangena amadoda amabini kwindawo esasihlala kuyo njengabefundisi. Bathi kum bangamaNgqina kaYehova. Sachitha isithuba esingaphezu kweyure sincokola ngeBhayibhile nokuba ithi singalubona njani unqulo lokwenyaniso.
Wawabona engabantu abanjani la madoda?
Ndayithanda indlela ababeqiniseke ngayo ngezinto abazifunde eBhayibhileni nendlela ababecaphula lula ngayo kwiBhayibhile yam yamaKatolika. Emva koko, elinye iNgqina, elinguMario laqalisa ukumane lindityelela. Lalinomonde futhi lithembekile—qho ngoMgqibelo ngentsimbi yethoba, nokuba sele kunetha, ndandiqiniseka ukuba liyeza.
Abanye abefundisi babesithini xa utyelelwe?
Ndandiye ndibacele ukuba beze xa siza kuba nesifundo seBhayibhile, kodwa akho nomnye owayeyibona ibalulekile loo nto. Kodwa mna ndandikuthanda ukufunda, kuba ndandifunda izinto ezibalulekileyo, ezifana nokuba kutheni uThixo enyamezele ubungendawo nokubandezeleka—nto leyo eyayindixake ixesha elide.
Ngaba abaphathi bakho bazama ukukuyekisa ukufunda iBhayibhile?
Ngo-1975 ndaya eRoma amatyeli amaninzi ndisiya kubacacisela indlela endizibona ngayo izinto ngoku. Abaphathi bam bazama ukujika iingcinga zam, kodwa akho nomnye owayesebenzisa iBhayibhile. Ekugqibeleni, ndabhalela iRoma ngo-Januwari 9, 1976, ndibaxelela ukuba andisenguye umKatolika. Kwiintsuku ezimbini emva koko, ndalishiya ikhaya labefundisi ndaza ndaqabela uloliwe ndisiya okokuqala kwintlanganiso yamaNgqina kaYehova, ekwathi kanti yindibano ekwakukho kuyo amabandla amaninzi. Apho yayahlukile indlela ezazisenziwa ngayo izinto kunaleyo ndandiyiqhelile! Ngqina ngalinye lalineBhayibhile yaye lihambisana nezithethi njengoko zazixubusha imixholo eyahlukahlukeneyo.
Yathini intsapho yakho ngayo yonke le nto?
Abaninzi bandichasa ngokukrakra. Kodwa ndafumanisa ukuba omnye wabantakwethu wayefunda IBhayibhile namaNgqina eLombardy, ummandla okumantla eItaly. Ndaya kumbona, xa ndandilapho amaNgqina andinceda ndafumana umsebenzi nendawo yokuhlala. Ekupheleni kwaloo nyaka ndabhaptizwa ndaza ndaliNgqina likaYehova.
Ekugqibeleni, ndiziva ndisondele nyhani kuThixo
Nakancinci! Ekugqibeleni, ndiziva ndisondele nyhani kuThixo, kuba oko ndikwaziyo ngaye kusekelwe eBhayibhileni kungekhona kwiintandabulumko okanye kwizithethe zecawa. Ibe ngoku ndingafundisa abanye ndiqinisekile ngenyaniso.
^ isiqe. 13 IBhayibhile iyiphendula ngokucacileyo le mibuzo neminye emininzi. Khangela phantsi komxholo IIMFUNDISO ZEBHAYIBHILE > IMIBUZO YEBHAYIBHILE IYAPHENDULWA.